Abadeshi bazokhumbuza uMaimane indawo yakhe – Bayede News
IPOLITIKI YAMAQEMBU Ngesikhathi amehlo kanjalo nabezindaba
by Bayede-News Posted on 26 September 2019 2 October 2019
UMholi weDA uMnu uMaimane, zimhlaba inxeba ziyamlandela
Ngesikhathi amehlo kanjalo nabezindaba bethe njo ezinkingeni ezikhungethe iqembu elibusayo i-African National Congress (ANC) kanye nalelo lesithathu ngobukhulu i-Economic Freedom Fighters (EFF), ElaboHlanga selingakuqinisekisa ukuthi iqembu lesibili ngobukhulu iDemocratic Alliance (DA) libhekene notavatava. Lesi simo singomholi waleli qembu uMnu uMmusi Maimane nalabo abathi sesifikile isikhathi sokuthi adedele abanye. Ngaphambi kokhetho lukazwelonke lapho leli qembu lingenzanga kahle ElaboHlanga laveza ngetulo lamanye amalungu ayethi akathwaliswe icala lokungenzi kahle kweqembu.
Ngaleso sikhathi leli phephandaba labika nokuthi abagxeki bakaMaimane babekulungele nokuthi uma bengaphumeleli ukumkhipha njengomholi bahlongoze ukuphuma inxiwa besebenzisa khona ukuthi ubuholi bakhe sebusukile ezingxabweni zeqembu njengoba sekukhuluma sakweseka uhlelo lweBlack Economic Empowerment (BEE).
Omunye osondelene neDA nonolwazi ngokuqhubekayo nocele ukuba igama lingadalulwa ukuqinisekisile ukuthi nembala itshe limi ngothi nokuthi amalungu eDA abelungu nabesondelene kakhulu noMaimane yiwo asekhaleni lomkhankaso wokududula lo mholi. “Izinto zimbi kule nsizwa, ijikelwe yizethenjwa zayo okungabelungu nokuyibo abangasamfuni nalapho ehambe khona,” kusho lo mthombo. Uthe emuva kokwehluleka ukududula uMaimane ngemiphumela yokhetho, kuzanywe udaba lwakamuva oluthinta indlu thizeni eCape Town. Kulokhu umthombo uthe: “Odabeni lwendlu inhloso bekuwukufaka umoya kwabezindaba ukuze kubhalwe okuthile ngoMaimane nokuzomthunaza. Uzoqaphela ukuthi lwathunyelwa kwabathile kwabezindaba. Inhloso bekuwukumhlasela nxa zonke njengoba ngempelasonto bekunokukhuluma kokuthi akube nokhetho lobuholi singakafiki isikhathi, abagxeki bakaMaimane bebehlele ukuthi udaba lwendlu luphume emasontweni amabili edlule ngenhloso yokufaka ingcindezi amalungu ayezohambela umhlangano wesigingu esiphezulu seqembu iFederal Council”, kusho umthombo.
Indlu le okukhulunywa ngayo ngekasomabhizinisi uMnu uWessel Jacobs. Indaba iqale lapho kuvela umbiko oputshuziwe lapho kuvele ukuthi uMaimane wawubhalisa njengowakhe ePhalamende. Yize lokhu kungeyona into etheni kepha ngokomthombo abagxeki bakhe bebehlose ukudweba isithombe sokuthi lo mholi ‘ungumkhovu’ kasomabhizinisi thizeni nokuyinto elunjaniswa kuleli nokugwamandwa kosopolitiki.
Leli qhinga liphunzile njengoba iFederal Council yamukele okushiwo nguMaimane ngalolu daba emuva kokuthi abagxeki bakhe bethe akaveze ubufakazi bokuthi uyayikhokha irenti. Lokhu akwejwayelekile ngoba kwabanye ikakhulukazi aboHlanga kuzwakale sengathi bayamngabaza umholi wami nokuthi okuthiwa akakwenze akukaze kushiwo kwabanye abaholi .
Ekhuluma nabezindaba umkhulumeli weDA uMnu uSolly Malatsi uthe: “Umhlangano uyimunyungile le ndaba yendlu okuyinto yangasese. Umhlangano wanelisekile yincazelo kaMaimane.” Leli phephandaba lingakuqinisekisa ukuthi bekungongaphansi nongaphezulu emhlanganweni abagxeki bakaMaimane bedudula ukuthi kutholakale ugcobho kanti abeseka uMaimane ikakhulukazi aboHlanga bemile ekutheni asikho isidingo.
Ngokusho komthombo isenzo sabaholi beDA boHlanga simdalele amahloni uMaimane njengoba bemsekile yize yena wayebashiye kude le ehamba nabadeshi, lo mthombo obabize ngamagama.
“Njengoba ngangishilo ekuqaleni, uMaimane wenze amaphutha amaningi njengomholi, kepha elikhulu kwaba yingesikhathi eziqhelelanisa nabaholi boHlanga. Ubekwenza kubonakale ukuthi akafisi ukuzibandakanya nabo njengebutho, ubewela ngakulaba abamhlophe, ngisho nakubeluleki bakhe bekuyikho lokho okuthe kungaphuma izibalo zokhetho baqhela,” kusho lo mthombo.
Okunye asolwa ngakho yindlela asingatha ngayo udaba oluthinta uMnu uSolly Msimang. Ngokusho komthombo kwabe kunesivumelwano sokuthi uMsimang owayeyiMeya yaseTshwane ngeke asingenele esokuba nguNdunankulu waseGauteng. Ibutho laboHlanga laphakamisa uMnu uMagashule Gana. Okwabethusa wukuthi uMsimang wabe eseshaya ungqimphothwe kwawuyena osesingenela lesi sikhundla noMaimane akangamkhuza kodwa esikhundleni salokho wameseka. Olunye udaba asolwa ngalo wukuwela ngakubadeshi odabeni oluthinta uNks uPhumzile Van Damme abathile eqenjini, okukholakala ukuthi yibo laba abadudula uMaimane, beseka ukuthi kube nophenyo ngodaba olumthintayo lokushaya nolwenzeka endaweni yokudla eKapa.
Ngenxa yokungaphumeleli kwetulo lokugudluza ngezizathu zemiphumela yokhetho kanye nangezinsolo zokugwamandwa, ElaboHlanga selingakuqinisekisa ukuthi abagxeki bakaMaimane bamunyunga eyokudalula amachilo ngezixebe thizeni abathi ngezakhe uMaimane. Leli phephandaba linalo igama lomunye oyilungu ozimisele ukuveza ukuthi wake wathintwa kabana nguMaimane ehhotela eKapa. Leli lungu liyikhansela nokuthiwa uMaimene wahlangana nalo ehhotela eKapa.
ElaboHlanga lithole ukuthi udaba lolu luyaziwa ngabaholi abathile (iphephandaba linawo amagama) nokusolakala ukuthi bangahle bakufakaze lokhu. Kulokhu umthombo ukhale ngokuthi uMaimane uyobe esedlala injeje okokugcina ngoba ngeke alulazeke nje kupolitiki kepha ukukhuluma lokhu kuyogadla ekhaya njengoba indoda iganiwe, inezingane futhi kunesikhundla nasenkonzweni.
“Uyabona njengoba kunokunengwa nje esizweni ngokuhlukunyezwa kwabesifazane, uma bephumelele ukuveza udaba lwamantobazene futhi babubeka ubufakazi kuyobe kuphelile ngempilo yomholi. Naye uyazi ngaleli tulo lokumfaka ingcindezi okokugcina,” kusho umthombo.
Inhloso yokudalula la machilo wukuthi uMaimane wukumqinda kanjalo nokuthi athambele ukuthi kube nokhetho oluphuthumayo lobuholi. Enye inhloso wukuthi kwakhiwe isithombe sokuthi ngaphansi kobuholi bukaMaimane iDA ihlehlelwe yizikhuni nokungaqhelisa abaxhasi.
Sekuvele kunocwaningo olwenziwe noluphakamisa ukuthi leli qembu lihanjelwa ngamalungu amanye aya kuFreedom Front Plus (FF+). Nokho kukhona ukwamukela kubagxeki bakaMaimane ukuthi akumele ukuphuma kwakhe ufa ngoba kungahle kubhebhethekise ukukhuluma okuthi aboholi boHlanga kule nhlangano bathi bangasetshenziswa bese belahla ngaphandle okwenyongo yenyathi.
Ukuzama ukudida imibala nokugwema ukuthi basolwe ngobuhlanga abagxeki bakaMaimane kuthiwa bangahle bafolose ngegama likaNks uSinethemba Amanda Gwen Ngwenya owabe eyiNhloko yoPhiko Olubhekele Inqubomgomo kuDA.
UMaNgwenya katholani noMaimane namsola ngokusuka emigomweni yeqembu nathi usefaka ipolitiki ‘yobuhlanga’ kuDA emveni kokweseka iBEE. Le ntokazi eke yaba yiChief Operations Officer kwaSouth African Institute for Race Relations neneziqu zeBachelor of Law (LLB) eyazithola eNyuvesi YaseKapa, iMasters ku-International Economics eyayithola eNyuvesi YaseParis.
Emuva kokhetho ithole isitulo ePhalamende kepha yenqaba ukusithatha nokwavela ukuthi yasinqaba nje yabe isizwile ukuthi ezikaMaimane zabe zizoyijijimeza ngoba babeyisola ngokuthi ayibanga yingxenye yemikhankaso yokhetho njengoba kwabe kulindelekile.
Uphetha umthombo uthe yize uMaimane enamaphutha akhe njengomholi okusobala kulokhu yikuthi abelungu kuleli qembu nokuyibo ngokomlando abayizindlamvuzo zeqembu kabaneme.
Kubo kukhona abathi ukwanda kwaboHlanga kugqiba ‘umlando’ weqembu noselokhu kwathi nhlo lihamba ngenkambiso ethize futhi lesekwa ngabelungu. Bakhala ngokuthi abelungu nezindaba ezithinta bona kuyaguguleka eqenjini yize kukuhle ukukhula kwalo njengoba selikwazi ukuheha ezinye izinhlanga.
Posted in Izindaba, Ozul'azayithole